ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြံဉာဏ် – အချစ်ဆွဲငင်မှု၏ပညတ္တိ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 08 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ဒါကြောင့်အချစ်ဆွဲငင်မှု၏ပညတ်တရားကားအဘယ်သို့? ရိုးရှင်းစွာအကကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက်တာသို့ကျနော်တို့အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်သောအရာတို့ကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်ပြောပါတယ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဥပဒေဖြစ်သည်ကိုတင်, အပြုသဘောဆောင်သို့မဟုတ်အပျက်သဘောရှိမရှိ. သင်ကသတိပြုမိကြသည်ဖြစ်စေမ, တိုင်းသင်ရှိသည်ထင်, သင်ခံစားရတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု, သင်တို့ကြားနဲ့ဖတ်ရှုအရာအားလုံး, သင့်ရဲ့အဖြစ်မှန်အပေါ်သက်ရောက်မှု.
အမှန်တကယ်သင်ဆက်ဆံရေးမှလိုချင်တာတွေကိုနားလည်နိုင်နှင့်အချစ်ဆွဲငင်မှုအခြေခံမူအချို့ကိုအလွန်အခြေခံဥပဒေလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်, သင်သင်သည်အဘယ်သို့အမှန်တကယ်အလိုဆန္ဒမရသေချာအောင်လိမ့်မယ်. အတိအကျဘာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အပြုအမူတွေကို, တန်ဖိုးများ, ယုံကြည်ချက်, သင်ရမည့်အစားသင်ချင်ကြပါဘူးဘယ်အမျိုးသားတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်လိုချင်တာတွေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်နှင့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုသင်အရေးကြီးလှသည်.
ကြိမ်ဖန်များစွာ, လူတွေဘာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပျက်ကွက်စောင့်ခြင်းငှါပြုလေသမျှမည်သည့်အတွေးပေးကမ်းဘဲတယောက်ကိုတယောက်ပျက်ကွက်ဆက်ဆံရေးမှသွားလိမ့်မည်. ပင်ပိုကောင်း, သူတို့မှန်ကန်သောကျော်မှနှင့်အလားတူသောအခါနောက်ထပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အဆုံးသတ်, သေးဆန့်ကျင်ဘက်အစွန်းအကြောင်းပြချက်.
သင်၏နောက်ဆက်ဆံရေးမှ n သာကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားဖြစ်သင့်
အကယ်စင်စစ်ငါသည်ကျွန်မအနည်းဆုံးပဲအဆုံးသတ်သည်ဆက်ဆံရေးမှ n ချင်ကြဘူးသိ. ငါကျရှုံးဆက်ဆံရေးကိုအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားငါလုပ်ခဲ့တဲ့တဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကူးသို့သမျှကိုကြေကွဲစရာပေါင်းစပ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်နှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအ pendulum အနည်းငယ် Swing ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်.
ကျနော်ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ပါ 'ဘူး’ ငါ့အဘို့စုံလင်တဲ့ဆက်ဆံရေး?
ငါသည်သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အတိအကျကိုလူတစ်ဦးကိုဆွဲဆောင်ရန်သင့်အားအမှန်တကယ်မြန်ဆန်ပြီးရိုးရှင်းလမ်းကိုပြသသွားမယ် – သင့်ရဲ့အိပ်မက်ရက်စွဲ!
စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ် ယူ. နှင့်သင့်ပြီးပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးအတွက်သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုရေးချ. သူသို့မဟုတ်သူမဘာကိုဒီလိုပဲ? သူတို့ကမည်သို့ကြည့်ရှုကြပါ, အနံ့, ဆွေးနွေးချက်? သင်သည်အမှုအရာတို့သည်တညီတညွတ်တည်း၏အဘယ်မျိုးကိုပြုလိမ့်မည်? သင်သည်ထိုသူတို့ပတ်လည်မှာရောက်နေလျှင်သင်မည်သို့ခံစားရပါသလဲ? တကယ်ပဲဒီသို့ရတိုင်းအသေးစိတ်ချရေးဖို့အချိန်ကိုယူ. ဒါဟာအဆုံး၌ကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်.
“သင်ရိုးရိုးဆင်းရေးသားခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဘာလိုချင်သည်ကိုသိရပါနဲ့, သင်တို့အနားမှာကြောင့်ဆိုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့် 80%!”
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံမှားသောစိတ်ဝင်မထားပါနဲ့. သင်တိုင်းလမ်း၌စုံလင်ဖြစ်ကြောင်းယူဆနှင့်သင်ချင်တယ်ဆိုတာရဖို့သင့်ရဲ့လမ်း၌ရပ်နေသည်ကိုတစုံတခုမျှမရှိ. မပိုက်ဆံ, သို့မဟုတ်ရူပ, သို့မဟုတ်အချိန်, အခြားသူသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှ.
သင်သည်ဤလေ့ကျင့်ခန်းပြီးသောအခါ, သင်ကဂိမ်းကောင်းကောင်းရှေ့ဆက်ဖြစ်လိမ့်မည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုအပ်အဖြစ်ကိုယူ… ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အဆုံးစွန်သောအောင်မြင်မှုသော့ချက်ဖြစ်သည်!
သင်ဘာလိုချင်လောက်သင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်ရှင်းလင်းသော Be. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, စကြာဝဠာ၏သင်တကယ် N လိုချင်တာတွေကိုမျှစိတ်ကူးရကြလိမ့်မည်ကြောင်းကို၎င်းသင်တို့ကိုပေးတော်မူမည်အဘယ်သို့သောင့်. (ပဲလုပ်ကြပါ, ငါ 'ဠာ' 'ဟုပြောသည့်အခါ, ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုဆိုလို, ဗုဒ္ဓ, မိခင်ကမ္ဘာမြေကြီး, သို့မဟုတ်သမျှအခေါ်အဝေါ်သင်သည်သင်၏ universal ပိုမိုမြင့်မားအာဏာကိုသုံးပါ။)
စိတ်ရှုပ်ထွေး? ငါနှင့်အတူအ Stay hereÖစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားနှင့် Hamburg အမိန့်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. အဆိုပါစားပွဲထိုးသင့်နိုင်ရန်အတွက်လှည့်. သင့်ရဲ့ Hamburg ရောက်ရှိမီက, သင်သည်သင်၏အမိန့်ကိုပြောင်းလဲ. ယခုသင်ကယ့် Steak ချင်သောစားပွဲထိုးပြောပြ. အဆိုပါစားပွဲထိုးသင့်နိုင်ရန်အတွက်လှည့်. သင့်ရဲ့ Steak ရောက်ရှိမီက, သင်သည်နောက်တဖန်သင်တို့ကသင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲကြပြီသောစားပွဲထိုးပြောပြပြီးသုပ်ချင်ပါတယ်. ယခုဤအချက်မှာ, အများဆုံးစားပွဲထိုးအသုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်သင့်အားပြောပြလို. စကြဝဠာဤသို့ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သင်မူကား, စကြာဝဠာ၏သင်သည်ပင်မသိကြပါအခါသင်ချင်တယ်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပေးဘို့အလွန်ခက်ခဲသည်မည်မျှကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်?
OK ကို N ချော?
သင်ကပြန်မသွားနဲ့ပြု n မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်. ငါသည်ဤရိုးရှင်းသောလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်, သင်မူကား, ဆဲအလုပ်၏အနည်းငယ်လုပ်ဖို့ရှိသည်.
ယခုသင်ကယ့်မိတ်ဖက်အတွက်တောင့်တသောအရာကို ပတ်သက်. အလွန်ရှင်းလင်းသောင်ကြောင်း, စက္ကူ၏အပိုင်းအစယူ, ကတက်ခေါက်နှင့်အနည်းဆုံးတစ်ပါတ်ကိုသင်တို့နှင့်အတူကသယ်. သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲတွင်သယ်ဆောင်, သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ် မှစ. ခါးပန်း၌, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အတွင်းခံအဝတ်အစားအတွက်. သင်ကဘယ်နေရာမှာပဲထားထားအရေးမပါဘူး, နေသမျှကာလပတ်လုံးအနည်းဆုံးတစ်ပါတ်ကိုသင်တို့နှင့်အတူစောင့်ရှောက်အဖြစ်. သင်နှင့်အတူစက္ကူဤအပိုင်းအစရှိသည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့အခါတိုင်း, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူရှိနှင့်တူကြလိမ့်မည်သည့်အရာ၏ခံစားချက်ကိုသတိရ. တကယ်ခံစားရ!
နောက်ထပ်တစ်ခုကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းရှိတယ်. ဒီရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့, သင်သည်သင်၏အူကိုနားထောင်ကြောင်းသေချာပါစေ, သို့မဟုတ်အတွင်းစိတ်စကားသံကို. သင်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြာသပတေးနေ့ကသွားသည့်အခါအင်္ဂါနေ့ကခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းရေးမှာကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားပြောပြလျှင်, အင်္ဂါနေ့ကသွား! သင့်ရဲ့လိုင်း၌ရပ်နေစဉ်သင်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုခရီးဦးကြိုခြင်းငှါ. ဒီနေရာမှာပွိုင့်ကိုသင်ဠာနှင့်သင်၏အမိန့်နေရာချပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်, ယခုသင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်သူတို့အပေါ်မှာသင့်ရဲ့လမ်းနှင့် ACT စေလွှတ်လျက်ရှိကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်!